जुनुको भान्छामा रामचन्द्रको अचार – Sourya Online
जुनुको भान्छामा रामचन्द्रको अचार
सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन ३० गते २:४० मा प्रकाशित
‘मलाई सिस्नो र ढिँडो पकाउनचाहिँ आउँदैन है’, प्रायः स्टेजहरूमा माइक समातेर गीत गाइरहेकी भेटिने गायिका जुनु रिजाल यतिखेर आफ्नै भान्छामा छिन् । डाडुपन्यु चलाउँदै उनी आफ्नो भान्से सीपको बखान गर्दै छिन्– ‘नेपाली खाना (दालभात) चाहिँ राम्रै पकाउँछु ।’ ढिँडो र सिस्नु पकाउनुपरे आफ्नै आमाबाट सिक्न सजिलो रहेको उनले सुनाइन् ।
नजिकै रहेका पति गायक रामचन्द्र काफ्ले उनका कुरा सुनेर मुस्कुराउँदै थिए । ‘जुनुको त हातै मीठो भनेको, जे पकाए पनि स्वादिलो’ –फुक्र्याउन भ्याइहाले– ‘खाना त यत्ति मीठो हुन्छ कि मेरो त तौल बढेर डाइटिङ गर्नुपर्लाजस्तो भइसक्यो ।’
कार्यक्रम परेका बेलाबाहेक प्रायः भान्सामा जुनु नै हुन्छिन् । रामचन्द्रले कत्तिको सहयोग गर्लान् त ? जुनु मुस्कुराइन्– ‘भान्सामा त उहाँको पनि निकै जाँगर चल्छ ।’ जुनुका अनुसार रामचन्द्र मासु निकै मीठो पकाउँछन् । अचार बनाउनमा पनि उनको दखल छ । ‘त्यसैले त अचार बनाउने काम सधैंँ उहाँकै जिम्मामा नि’, चार वर्षअघि लगनगाँठो कसेको दम्पती एकअर्काको प्रशंसा गर्दै थियो– ‘मेरो पकाउने सीपको गुरुचाहिँ जुनु नै हुन् । खोइ कसरी पकाउँछिन् कुन्नि, साधारण तरिकाले पकाउँदा पनि त्यत्तिकै मीठो ।’
माइतीमा हुँदा नै जुनुकी आमाले उनलाई सामान्यतया सबै आइटम पकाउन पर्फेक्ट बनाइसकेकी रहिछन् । तर, पनि जुनुले मात्र सधैंँ खाना पकाउनुपर्छ भन्ने कसीकसाउ नियम उनीहरूकामा छैन । मासु ल्याएको बेलाँ जुनु आरामले हेरेर बस्छिन्, डाडुपन्यु रामचन्द्रको हातमा हुन्छ ।
अहिलेसम्म खाना नमीठो भएको गुनासो चलेको छैन रे जुनुको भान्सामा । सफा अनि चिटिक्क साजसज्जा, मिलाएर राखिएका भाँडाकुँडा उनको भान्छाका विशेषता हुन् । रोटी साह्रै मन पराउँछ काफ्ले दम्पती तर कमै पाक्छ । किन त ? ‘अलि झन्झटिलो हुन्छ क्या बनाउन’, उनले अप्ठ्यारो सुनाइन्– ‘फेरि फुर्सदै हुँदैन भन्या, रोटी बेल्नै एक घन्टा लाग्छ, के गर्नु !’
जुनु सागपात बढी मन पराउँछिन्, रामचन्द्रचाहिँ माछामासु । तर सामान्यतया एकअर्काका रोजाइ उनीहरूलाई मन नपर्ने खासै छैनन् रे ! ‘खानामा मात्र होइन, अरू कुरामा पनि हाम्रो रोजाइ मिल्छ, त्यसैले त जोडी पनि मिलेको होला नि’ –रामचन्द्रले यसो भन्दा जुनु मुस्कुराइन् ।
रामचन्द्रलाई मुलाको चाँपेको अचार साह्रै मन पर्छ तर जुनुलाई त्योचाहिँ बनाउन आउँदैन । समाधानका लागि उनी माइती पुग्छिन् र त्यहीँबाट ल्याउँछिन् । ‘आमाले चाँपेको अचार असाध्यै मीठो बनाउनुहुन्छ, उहाँले नै बनाइदिनुभएपछि मेरो झन्झटै खत्तम,’ निस्फिक्री भइन् उनी ।
खाना पकाउन अल्छीचाहिँ कत्तिको लाग्छ त जुनुलाई ? ‘बिहान त मेहनत गरेरै पकाउँछु । पाँच आइटम पाक्छन् मेरो हातबाट । बेलुकीचाहिँ कहिलेकाहीँ बाहिरै खाइदिन्छौंँ । बेलुकी खाना त कमै गर्नुपर्ने पनि भइसक्यो भन्या, आरसी (रामचन्द्र) जीको तौल निकै बढिसक्यो’ –जुनु सकेसम्म बेलुका खाना नपकाउने आइडिया फुराउँदै थिइन् । रामचन्द्रले उनलाई झन् सजिलो पारिदिए– ‘खाना त ताजै खानुपर्छ । फ्रिज गरिएको खाना मन पर्दैन । बरु बाहिरै खाने, सकभर फ्रिजमा राखेको चाहिँ नखाने ।’